Hello Nepal News » सिटीलाई नेइमारको चुनौती : फाइनल प्रवेशका लागि मैदानमा मर्न पनि तयार !
सिटीलाई नेइमारको चुनौती : फाइनल प्रवेशका लागि मैदानमा मर्न पनि तयार !
एजेन्सी वैशाख २१
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति सेमिफाइनल अन्तर्गत दोस्रो लेगको निर्णायक खेलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी र गत सिजनको फाइनालिस्ट फ्रेन्च क्लब पिएसजी निर्णायक खेल खेल्दैछन् । सो खेल सिटीको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । यो खेलपछि फाइनल पुग्ने पहिलो टोलीको टुंगो आजै लाग्नेछ ।
यसअघि पिएसजीको घरेलु मैदानमा भएको पहिलो लेगमा सिटीले १–२ को जित निकालेको छ । उसलाई अवे लेगमा २ गोलको फाइदा छ । तसर्थ, आज आफ्नो घरमा उत्रिँदा उसलाई १–० को हार भए पनि कुनै फरक पर्दैन । तर, पाहुना टोली पिएसजीले भने आज नतिजा उल्टाउनुपर्छ । त्यसका लागि पिएसजीलाई कम्तीमा ०–२ वा २–३ को जित चाहिन्छ । यी दुई नतिजाबाहेक पिएसजी आउट हुनेछ भने सिटी फाइनल पुग्नेछ ।
सिटीविरुद्धको निर्णायक खेलअघि पिएसजीका स्टार फरवार्ड नेइमारले आजको खेलबारे आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् । उनले खेलको एक दिनअघि मिडियासँग कुरा गर्दै आफूहरूले सिटीविरुद्ध कमब्याक जित निकालेर अघि बढ्ने विश्वास गरेका छन् । पहिलो लेगको नतिजा कस्तो छ भन्ने कुरा बिर्सेर पिएसजीले जितको लक्ष्यका साथ खेल्ने ब्राजिलियन खेलाडीले बताएका छन् ।
‘म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको हाम्रो खेल धेरै गाह्रो हुनेछ । तर, हामीले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । अघिल्लो लेगको नतिजा के छ भनेर हामीले नसोची नयाँ लक्ष्यका साथ खेल्नुपर्छ,’ नेइमारले भनेका छन्, ‘मलाई थाहा छ, सिटीजस्तो टिमविरुद्ध नतिजा उल्ट्याउन सजिलो छैन । त, असम्भव पनि छैन । हामी यो खेल कुनै पनि मूल्यमा जित्न चाहन्छौं ।’
हरेक पेरिसबासीले पिएसजीको टिममाथि विश्वास गर्नुपर्ने र आफूहरूले त्यसलाई सही साबित गर्नुपर्ने नेइमारले बताएका छन् । १ प्रतिशत सम्भावना छ भने पनि त्यसलाई विश्वास गरेर लड्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रत्येक पेरिसबासीले हामीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ र म नै पहिलो हुँ भन्ने मान्नुपर्छ । म मोर्चामा छु । म यो लडाइँको पहिलो योद्धा हुँ,’ नेइमारले भने, ‘यदि त्यहाँ मात्रै १ प्रतिशत सम्भावना छ भने पनि हामी १०० प्रतिशत त्यसमा विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेइमारले फाइनल पुग्नका लागि आफूले व्यक्तिगत रूपमा टिमलाई १०० प्रतिशत योगदान दिने बताउँदै मैदानमा मर्न परे पनि पछि नपर्ने बताएका छन् । ‘फाइनल प्रवेशका लागि म १०० प्रतिशत प्रयास गर्नेछु । यसको अर्थ यदि मैदानमा मर्नु नै हो भने पनि म तयार छु,’ नेइमारले भने, ‘अहिले मैले जित र फाइनल प्रवेश बाहेक केही सोचेको छैन । यतिबेला हामी सबैको एक मात्रै लक्ष्य फाइनल बन्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:४१